ပန်းကမ္ဘာ: ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ကာ နှင့် ဝိပဿနာ အမေးအဖြေများ ၃
" ပရမာနံ ကမ္မံ ပါရမီ - ပါရမီထိုက်သော အလုပ်များသည် မြင့်မြတ်သူတို့အတွက်သာဖြစ်၏ "
ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ကာ နှင့် ဝိပဿနာ အမေးအဖြေများ ၃
Gurugyi S.N.Goenka and His Students From Western
မေး ။ ။ လောကနဲ့ အဆင်မပြေလို့ နေရထိုင်ရခက်နေသူတွေအဖို့ ကမ္မဌာန်းအားထုတ်တာ အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကို နားလည်နိုင်ပါတယ်။သို့ သော်လည်း နေသားတကျနဲ့ ကျေနပ်ပျော်ရွင်နေတဲ့သူအဖို့ ကမ္မဌာန်းအားထုတ်စရာလိုပါဦးမလား။
ဖြေ ။ ။ နေသားတကျနဲ့ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေသူဆိုတာဟာ ဘ၀ရဲ့ သာယာမှုတွေကို အဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့ ကျေ နပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ ရင်ထဲမှာ မပြေလည်နိုင်တဲ့ အကြိတ်အခဲတွေရှိနေတာကို သူမသိသေးလို့ သာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ ကိုယ်သူ ပျော်နေတယ်လို့ ထင်နေတာဟာ သူ့ ကိုယ်သူ လှည့်စားမှန်းမသိ လှည့်စားနေတာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူပျော်ပိုက်နေတဲ့ ဘ၀ရဲ့ သာယာမှုတွေဟာ တည်မြဲခြင်းမရှိတဲ့အတွက် စိတ်ထဲမှာ တထင့်ထင့်နဲ့ ဘယ်တော့များ ဒါတွေကွယ်ပျောက် သွားပါလိမ့်မလဲလို့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုက ရှိနေပါတယ်။
ဒီကြောင့်ကြမှုကို မသိလိုက် မသိဘာသာ အကြာကြီးနေလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ တစ်ချိန်ချိန်တော့ စိတ်ထဲမှာ သိသိသာသာကြီး စနောင့်စနင်းဖြစ်လာမှာ သေချာပါတယ်။ အဲဒီ စိတ်မငြိမ်မှု ၊ စိုးနှောင့်မှုတွေ သိသိသာသာကြီး ခံစားလာရတဲ့ တစ်နေ့ မှာ သူဟာ အလွန်စိတ်ဆင်းရဲရပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခြေအနေမျိုး ဖြစ်မလာခင်မှာလည်း အခုကတည်းကစပြီး တရားအားထုတ် ဖို့ မကောင်းပေဘူးလား။ မေး ။ ။ ဆင်းရဲခြင်းသည် အစစ်ပကတိဖြစ်မြဲသဘောပင် မဟုတ်ပါလား။ ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ရေးကို ဘာကြောင့် ရှာဖွေဖို့ အကြောင်းရှိပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျွှန်ုပ်တို့ တစ်တွေမှာ ဒုက္ခနှင့်ရောထွေးယှက်တင်ဖြစ်နေကြတဲ့အတွက် ဒုက္ခကလွတ်မြောက်ရေး ဆိုတာ ဖြစ်မြဲသဘောနဲ့ ဖီလာနေသလို ထင်ရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ရဲ့ ဖြူစင်သန့် ရှင်းမှုကြောင့်ခံစား ရတဲ့ ချမ်းသာမှုအစစ်ကိုတွေ့ ကြုံရတဲ့အခါမှာတော့ အေးငြိမ်းရွှင်ပျနေတဲ့စိတ်ဟာ စိတ်ရဲ့ ပကတိသဘာဝဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်ပါ လိမ့်မယ်။ မေး ။ ။ ဒုက္ခကို ခံစားရတဲ့အတွက် လူ့ စိတ်ဟာ ပိုမိုမြင့်မြတ်လာပြီးတော့ အကျင့်စာရိတ္တ ရင့်သန်လာနိုင်မယ် မဟုတ် ပါလား။
ဖြေ ။ ။ မှန်ပါတယ်။ ဒီဝိပဿနာနည်းကလည်း တစ်ကယ့်တော့ ဒုက္ခကို အရင်းခံထားပြီးတော့ သူတော်ကောင်း များ ဖြစ်ရေးကိုလုပ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ သော်လည်း ဒုက္ခကို ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ ရှုမြင်နိုင်မှသာ သူတော်ကောင်း ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒုက္ခကို "ငါ့ဒုက္ခပဲ" လို့ ငါစွဲနဲ့ သုံးသပ်နေသရွေ့ တော့ သူတော်ကောင်းစိတ်မ၀င်ပါဘူး။ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း က လွတ်မြောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မေး။ ။ကျွှန်တော့်မှာသူတစ်ဖက်သားကို အထင်သေးတတ်တဲ့ ဥာဉ်ကလေးရှိပါတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လိုများ ပျောက် အောင် လုပ်နိုင်ပါ သလဲ။
ဖြေ။ ။ ကမ္မဌာန်းအလုပ်နဲ့ ပဲဖျောက်ပါ။ အတ္တစွဲသန်တဲ့အခါမှာ "ငါဆိုမှငါ" ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ တစ်ဖက်သားကို အထင်သေးတတ်ပါတယ်။ အထင်သေးတဲ့ ကိုယ်နှုတ်အမူအရာတွေပေါ်တတ်ပါတယ်။ ကမ္မဌာန်းရှုမှတ်တဲ့အလုပ် လုပ်တော့ကာ အတ္တစွဲဟာ ပျောက်သွားပါတယ်။ အတ္တစွဲပျောက်ပြီဆိုရင် သူတစ်ဖက်သားကိုနစ်နာစေလိုမှုကို မလုပ်တော့ ပါဘူး။ ကမ္မဌာန်းအလုပ်သာလုပ်ပါ။ ခင်ဗျားပြဿနာ အလိုလိုပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
မေး။ ။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားတွေအတွက် စိတ်မသန့် တာမျိုးဖြစ်ရပါတယ်။
ဖြေ။ ။ မိုက်မှားမိခဲ့တာတွေ ပြန်တွေးပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်တာဟာ ဘာမျှအကျိုးမရှိပါဘူး။ တရားလမ်းစဉ်မှာ အဲဒီ (ကုက္ကုစ္စ)စိတ်ဟာ တရားကျင့်ရာမှာ မပါသင့်ပါဘူး။ မသင့်လျော်တဲ့ အမှုတစ်ခုခုပြုခဲ့မိလို့ သိလိုက်တဲ့အခါမှာ "သြော်...ငါ တော့ အဲဒီမှာနေရာမှာ မှားသွားခဲ့ပြီ" လို့ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကို မှန်တဲ့အတိုင်း ၀န်ခံထားပါ။ မှားတာကို ဆင်ခြေတက် ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့ ။ ဖုံးကွယ်ဖို့ လည်းမကြိုးစားပါနဲ့ ။
ကိုယ်က လေးစားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးဆီသွားပြီး "ကျွှန်တော်တော့ ဒီနည်းဒီပုံမှားတာလုပ်ခဲ့ပြီ။ နောင်ကို ဒီလိုမလုပ်မိ အောင် ဆင်ခြင်ပါ့မယ်" ဆိုပြီး ဖွင့်ဟ၀န်ခံလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ကမ္မဌာန်းအလုပ်ပဲဆက်လုပ်ပါ။ ခင်ဗျားရဲ့ စိတ်အနှောင့် အယှက်ဟာ ပြေပျောက်သွားတာ တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။
မေး။ ။ အတ္တဟာ ဘာကြောင့် ဒီလောက်တောင်ကြီးထွားနေရပါသလဲ။ ဘာကြောင့် တငါငါနဲ့ ဖြစ်နေရပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ အတ္တ လို့ အမြင်မှောက်မှားအောင် အ၀ိဇ္ဖာက တစ်ချိန်လုံးစေ့ဆော်ပေးနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အတ္တစွဲကြီးနေတာကို ၀ိပဿနာနဲ့ ချွေချွတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၀ိပဿနာရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ကိုယ့်ဖို့ ကိုယ့်အကြောင်းချည်း စဉ်းစားနေရာကနေပြီး သူတစ်ပါးအကြောင်းများကို စဉ်းစားတတ်လာပါလိမ့်မယ်။
မေး။ ။ ဘယ်လို ဘယ်လိုဖြစ်လာမှာပါလဲခင်ဗျာ။
ဖြေ။ ။ ပထမခြေလှမ်းအနေနဲ့ ကတော့ "ငါဟာ တယ်ပြီး တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်လှချည်လား၊ အတ္တသန်လှပါတကားလို့ " ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိရပါတယ်။ အဲဒီအမှန်သဘောကို မှန်တဲ့အတိုင်းမမြင်နိုင်သေးသမျှတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရူးအမူး ချစ်ခင် နေမှာပါပဲ။ ၀ိပဿနာရှုမှတ်မှုကျင့်သားရလာတဲ့အခါ သူများအပေါ်မှာ ကိုယ်ချစ်နေတာကိုပဲ အမှန်အတိုင်းမြင်လာပါတယ်။ ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတော့ ငါဘယ်သူ့ ကိုချစ်တာလဲ ၊ အဲဒီသူကို ချစ်တယ်ဆိုတာ သူ့ ဆီက တစ်ခုခုရချင်လို့ သာချစ်တာပဲ။ ငါကြိုက်တဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်ပေးနေလို့ သာ ချစ်တာပဲ။ ငါကြိုက်သလို သူက လိုက်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ တစ်နေ့ မှာ သူ့ အပေါ်ငါမချစ်နိုင်တော့ဘူး။ ဒီလိုဆိုတော့ ငါသူ့ ကိုချစ်တာ ဟာ သက်သက်သူ့ ကိုပဲချစ်တာလား။ ငါ့ကိုယ်ငါ ချစ်တဲ့အတွက် သူ့ ကို ငါချစ်တာမဟုတ်လား။ အဲဒီလိုစဉ်းစားတတ် လာတယ်။ အဲအခါမှာ အဖြေမှန်ပေါ်လာတယ်။ ပေါ်တဲ့အဖြေမှန်က သာမန်ဆင်ခြင်တွေးဆချက် ကြောင့် ပေါ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ပိပဿနာလေ့ကျင့်တဲ့အတွက် ရတဲ့ဥာဏ်ပါ။ အဲဒီဥာဏ်ပေါ်တယ်ဆိုရင် ငါစွဲမထားတော့ဘူး။ တစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ်ပျောက်ပြီး တစ်ပါးသူတို့ အပေါ်မှာ တစ်ကယ့်ကိုယ်ကျိုးမပါတဲ့စိတ်နဲ့ ချစ်တတ်လာမယ်။ သူများ ဆီက ရယူလိုစိတ်မပါတဲ့ ကိုယ်ကပေးချင် ကမ်းချင်စိတ်တွေဝင်လာမယ်။ မှတ်ချက်။ ။ ဦးတင်ဦး ( မြောင် ) ဘာသာပြန်ဆိုထားသော The Art of Living , Vipassana meditation as taught by S.N.Goenka , William Hart စာအုပ်ကို ကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှု့ မှတ်သားပြီး သကာလ ပြန်လည်စာစီ စာရိုက်ခြင်းပြုကာ ကျွှန်တော့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ ဗဟုသုတတိုး ၊ မှတ်သားစရာများ မှတ်သားစေခြင်းအလို့ ဌာ ပြန်လည်ကုသိုလ်ပြုဖော် ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွှန်တော်စာစီစာရိုက်၍ပြန်လည်မျှဝေခဲ့သော ဆရာကြီးဦးဂိုအင်ကာနှင့်အမေးအဖြေကောင်းများ ကိုလည်းအောက်ပါ Link များတွင်ပြန်လည်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Htoo Tint Naing
ဂုရုကြီး ဂိုအင်ကာ ၏ ၀ိပဿနာ ဆိုင်ရာ အမေးအဖြေများသည် လူအားလုံးတို့၏ တကယ့်လက်တွေ့ ဘ၀ထဲတွင် အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်နည်း၊ သောက များကို ဖြေဖျောက်နည်း စသည်ဖြင့် အတုယူစရာ၊ လိုက်နာ ကျင့်ကြံအား ထုတ်စရာအချက်အလက်များ အများအပြား ပါဝင်နေတာမို့ ကြိုက်နှစ်သက်သောကြောင့် မှတ်တမ်းအဖြစ် ကူးယူ သိမ်းထားလိုက်ပါသည်။ မူရင်းဘာသာပြန်သူ ထူးတင့်နိုင် အား ကျေး၊ဇူးအထူး တင်ပါသည်။ အခြားသော အမေးအဖြေ များကိုလည်း ဤနေရာတွင် လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါသေးသည်။ at
ငြီးညူမရှိ သတိမမေ့ ချိန်နေ့သိပြန် မျက်လန်ကြောဆွဲ မရှိဘဲနှင့် သေလည်းမတောင့်တင်း ပုပ်နံ့ကင်းသည် ကျိုးရင်း ၀ိပဿနာ တန်ခိုးတည်း၊ ၊ (တော်ကူးဆရာတော်) Vipassana
Just as we use physical exercises to improve our bodily health, Vipassana can be used to developahealthy mind.S.N. Goenka
For the Research
DhammaTalk & EBooks
Index of Suttas
BPS in Sri Lanka
Mijjhima Nikaya Notes
ဓမ္မပဒ၊ ပါဠိ၊မြန်မာ၊ English
ကိုယ်တည်းတစ်ယောက် ဆင်းရဲရောက်လို့၊ ကိုယ့်နောက်အများ ချမ်းသာပွားမူ တပါးဖြစ်ထွေ ဆင်းရဲစေတော့ စိတ်နေခုလို ၀မ်းဝယ်သို၍၊ ထိုထိုအလုပ် လွန်ကြိုးကုတ်သော် မဟုတ်သတင်း လုပ်ဇာတ်ခင်းလျက်၊ ချင်းချင်းရွဲ့သံ၊ ကဲ့ရံ့သံကို၊ နာခံမငြီး ပြည်လုံးဟီးမျှ၊ ဝေးနီးအနှံ့ ပျံ့အောင်ဖြန့်လည်း၊ မခံ့တခံ့ ၊ ခံ့တခံ့နှင့်၊ ကြံ့ကြံ့ပုံသေ ခံခဲ့ပေ၏။ စာလုံး ချုံ့ ချဲ့လိုလျင် -
Font ဆိုက် သေးနေလျင် Ctrl နှင့် + ကို တွဲနှိပ်ပါ၊Fontဆိုက် ကြီးနေလျင် Ctrl နှင့် - ကို တွဲနှိပ်ပါ၊
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ Mumbai မြို့တွင်P hD အတွက် ကျမ်းပြုရင်းပရဟိတအလုပ်များကိုလည်းစွမ်းနိုင်သမျှ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိ၊ ၄ လပိုင်းမှစ၍ မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေမည်.အရှင်သုနန္ဒာလင်္ကာရ M A ( ပန်းကမ္ဘာ )
Pann GabarCreate your badge
တိပိဋက( ပါဠိ )
ပရဟိတ၊ ပရိယတ် ပဋိပတ်
မေတ္တသုတ် ( မြန်မာပြန် အဓိပ္ပါယ် )
( ၉ ) ကြိမ်မြောက် ပိဋကတ်ကျမ်းစာအုပ်များ လှူဒါန်းမှု...
ယောက်ျားတစ်ပါး မသွားလာပဲ အပျိုစင်စစ်စစ် ဘ၀ဖြင့်ပင်...
" အရဟတ္တဓဇ ဆင်မြန်းသူများ "
ငါ - စွဲ အတ္တများ လျော့ပါးချိန်
ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ကာ နှင့် ဝိပဿနာ အမေးအဖြေများ ၂
ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ကာ နှင့် ဝိပဿနာ အမေးအဖြေများ ၁
တပေါင်းလပြည့် ကပိလ၀တ် ပြည်တော်ဝင်အခါတော်နေ့
မဟာဗုဒ္ဓ၀င် - ebook များ
ခန္ဓာနှင့် ငါ စစ်ကြည့်ပါ
The Best English4You
Spotlight radio English
BBC earning english
Learning English 2
Reading makesafull man;conferenceaready man;and writing an exact man.(Francis Bacon (1561-1626))စာဖတ်ခြင်းကြောင့် အသိဉာဏ် ပညာ ပြည့်စုံသူ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဆွေးနွေးခြင်းကြောင့် အဆင်သင့်ဦးဆောင်သူဖြစ်နိုင်တယ်၊ စာရေးခြင်းကြောင့်အရာရာတိကျသူ ဖြစ်နိုင်တယ် - တကယ့် အလှတရား
ရိုးသားခြင်းကင်းသော ရုပ်အလှသည်ဆွဲဆောင်မှု့ မရှိ။ရိုးသားခြင်းကင်းသော ချမ်းသာမှု့သည်စိတ်ချမ်းသာမှု မဖြစ်စေ။ရိုးသားခြင်းကင်းသော ပညာတတ်မှုသည်အဆိပ်လူးသော မြားနှင့်တူ၏။ရိုးသားခြင်းကင်းသော အောင်မြင်မှုသည်အခြေခံအုတ်မြစ် မခိုင်သောအဆောက်အအုံသဖွယ် ဖြစ်၏။
ခရီးသွား / ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း
ဟိန္ဒူတို့၏ဖန်ဆင်းရှင် Gods အကြောင်း
ထေရ၀ါဒ နှင့်မဟာယာန ကွာခြားချက်များ
ရှေးဟောင်း နယ်မြေ Kanheri Caves
“ရွှေစင်ဖြစ်လာတဲ့ သတ္တုများ” ဓမ္မဘေရီအရှင်ဝီရိယ(တောင်စွန်း)
မင်းသားကြီး မလုပ်ရသဖြင့် ပတ်မကြီး ထိုးဖောက်မလုပ်ဖို့ ပြောကြား၊
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဖွားမြင်တော်မူသည့် ခုနှစ်
ဆရာတော် မြန်မာပြည်တွင် ရှိနေမည်
ဒေါက်တာအရှင်ပါရမီ၏ မွေးနေ့အလှူတော် ၀ိဇာတမင်္ဂလာ
၃၁ ဘုံမှာ သတ္တဝါတွေ ဘာကြောင့် မကုန်နိုင်တာလဲ
သင်သေသွားသော် . . . . .
ကျွန်မ ရဲ့ ဒီနေ့ တနင်္ဂနွေ နှင့်လှပသောရန်ကုန်မြို့
မှန်းဆကာ လွမ်းရပါသည် .. ခမာပြည် ...။
~ ရွှေရတု အကြို ~
Yamuna Online Clinic
ဒုတိယအကြိမ် ဒိုမိန်းလှုဒါန်းခြင်းနဲ့ထပ်တိုးကောက်ခံရရှိသော အလှုငွေစာရင်း
ထမင်းလုံးတစ္ဆေခြောက်ခြင်း (Hypnogogic jerk)
မဟာဆန်သူကြီး ရဲ့ ပန်းဝတ်မှုံ
ဗုဒ္ဓဓမ္မမှ သီလရှင်များအား (၂၁)ကြိမ်မြောက် လှူဒါန်းမှု
ခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာ Rev.T.Peter/S.Gum Aung (Professor) နှင့် ပတ်သက်၍ စုစည်းမှု
<!-dial code widget - html code - dialcode.org -->	International Dialing Codes<!-end of code-->
'' မာန ဟူသည် " မာန ဟူသည် ဇာတိအနွယ်၊ အမျိုးကျယ်၍၊ရာထူး အာဏာ၊ ပညာဂုဏ်ဒြပ် လှဂုဏ်ဖက်လျက်၊စည်းစိမ်ဥစ္စာ ကျမ္မာ ငယ်ဂုဏ်၊ တစ်စုံတစ်ရာ ရှိကြပါမူ၊ငါနှင့် မတန်၊ ငါ့ဟန် ငါသာ၊ ပြိုင် မလာနှင့်၊၀ါးခေါင်းလသာ၊ နှိုင်းပမာသို့၊နားထင်သွေးရောက် ဂုဏ်မောက်တတ်စွ၊ အင်္ဂါအားလုံး သိမ်းကြုံးကာသာ ပြည့်စုံပါမူ၊ကျားကို တောင်ပံ၊ တပ်သည့်ဟန်သို့၊ထိုသူ့ မာန၊ တိုင်းအဆကား၊ဆိုဖွယ်စကား မရှိငြားတည်း၊ ရာထူးအာဏာ၊ ပညာ ရူပ၊ ဂုဏ် ဓနတို့၊ဖြစ်မြဲဓမ္မတာ၊ အနိစ္စာဖြင့်၊ရွေ့ရွေ့ကုန်ဆုံး၊ ပျက်ပြယ်သုဉ်းက၊ထောင်လွှားတတ်လှ၊ မာန်မာနတို့၊လျောကျသည်မှာ မလွဲသာရှင့်။ မာနကိုယ်စီ၊ ဘ၀င်ချီလျက်၊တစ်ရာတမ်းမှာ၊ လူဖြစ်လာကြ၊ တခဏ၀ယ်၊မာ- လျင်၊ န-မြဲ၊ သဘောပဲမို့၊ကာလရွှေ့ပြောင်း၊ အချိန်နှောင်းက၊ရန်ငြိုးအာဃာတ၊ ဗလပွနှင့်၊ဒဏ်ရာကိုယ်စီ၊ နောင်တဆီသို့၊ချဉ်းကပ်ရင်းသာ၊ ရင့်ကျက်လာသည်၊လူ့ရွာ မာန၊ ပြိုင်ပွဲတည်း…အမှားကိုယ်စီ ရှိမြဲတည်း… အရှင်သုနန္ဒာလင်္ကာရ M.A ( ပန်းကမ္ဘာ )Date. 15. Mar. 2012
ကိုယ်သိ ကိုယ်တတ်သဘောမျိုး မဟုတ်ပဲ သိထားတာလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေချင်လို့ဝါသနာကြောင့် စာရေးနေမိတာပါ၊ကိုယ်ရေးတဲ့စာတွေကြောင့်သူတစ်ပါးကို မထိခိုက်စေချင်သလို၊စိတ်ဆင်းရဲတာတွေလည်း မဖြစ်စေချင်ပါ -
“ ဘာစာကိုပဲ သင်သင်၊ ဘယ်နိုင်ငံကိုပဲ ရောက်ရောက်၊ ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲ နေနေ၊ ဘယ်ကျောင်းမှာပဲ တက်တက် ဘယ်လို အယူဝါဒတွေကို လေ့လာ လေ့လာ ဘယ်ဘာသာတရား အယူဝါဒနဲ့ပဲ နှိုင်းယှဉ်သည်ဖြစ်စေ ဗုဒ္ဓဓမ္မဘက်ကအမြဲတမ်း ရပ်တည်ပါမယ် " Template images by 5ugarless. Powered by Blogger.